Ny minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo dia mahita fa ekena ny politika
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ny minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo dia mahita fa ekena ny politika
Desambra 18, 2018
Ny tale jeneralin'ny SA fizahan-tany, Sisa Ntshona, dia nanaiky ny fanasan'ny World Tourism Organization hanatevin-daharana ny Birao Mpanolo-tsaina ny programa UNWTO.QUEST.
Derek Hanekom, ny minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo dia mahita fa ekena ankoatra ny sisintanin'i Afrika ny politikany. Ny fanasana vao haingana an'i Sisa Ntshona, ny CEO an'ny SA fizahan-tany hanatevin-daharana ny Birao Mpanolo-tsaina an'ny World Tourism Organization an'ny UNWTO. Fandaharana QUEST dia naneho ny fanajana an'i Afrika Atsimo amin'ny fizahan-tany maneran-tany amin'ny maha-mpilalao matotra sy manan-danja azy.
Ny tale jeneralin'ny SA fizahan-tany, Sisa Ntshona, dia nanaiky ny fanasan'ny World Tourism Organization hanatevin-daharana ny Birao Mpanolo-tsaina ny programa UNWTO.QUEST - rafitra fanamarinana ho an'ny Organisation Management Destination (DMO).
Ny programa dia namboarin'ny UNWTO hampiroborobo ny fahambonian'ny DMO amin'ny fitantanana, ny drafitra ary ny fitantanana, ary fitaovana stratejika hanatsarana ny fahaiza-manao anatiny sy ny fizotran'ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fananganana fahaiza-manao sy fiofanana, hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifaninanana sy faharetan'ny toeran-kaleha.
UNWTO.QUEST dia hanohana ny DMO amin'ny fanamafisana ireo sehatra telo lehibe hanatanterahana ny fitantanana tanjona: ny fitarihana stratejika, ny fanatanterahana mahomby ary ny fitantanana mahomby.
Ny fanasana an'i Ntshona dia mivaky toy izao: "Manoloana ireo voalaza etsy aloha sy mandinika ny fahalalanao sy ny traikefanao miavaka amin'ity sehatra ity, dia faly izahay manana anao ho mpikambana ao amin'ny UNWTO.QUEST Advisory Board," ary neken'ny tale jeneraly.
Ny mpikambana ao amin'ny birao dia tompon'andraikitra amin'ny famerenana ny tatitra momba ny fanaraha-maso noforonin'ireo manam-pahaizana notendren'ny Akademia UNWTO amin'ny dingana manokana amin'ny fizotrany ary hanamarina ny valiny mba hiantohana ny fenitra teknika avo lenta, ny fahombiazana ary ny mangarahara amin'ny alàlan'io dingana io.
“Ity fanasana ity dia porofon'ny asa izay ataon'ny SA fizahan-tany, sy ny mombamomba azy namboarina - izay ahazoana fankasitrahana manerantany. Fotoana mirehareha ahafahan'ny DMO Afrikana miditra amin'ny sehatra manerantany mandrafitra ny politika sy ny tombana, ”hoy i Ntshona.
Ny fe-potoam-piasan'ny Birao dia hifarana amin'ny 31 Desambra 2019, miaraka amin'ny mety fanavaozana.